Ungayisheshisa kanjani i-KDE, iyashesha futhi ilula | Kusuka kuLinux
Ungayisheshisa kanjani i-KDE, kulula futhi iyashesha
I-KDE mhlawumbe imvelo yedeskithophu ephelele kakhulu yeLinux. Isolwa nangokuthi yiyo edla izinsizakusebenza eziningi.Ukuze ukusheshise, iqhinga ukunciphisa ezinye zezici zayo, kepha ayiphenduki ideskithophu engcolile.
1 Yenza izinguquko ngokuzenzakalela
2 Yenza izinguquko "ngesandla"
Yenza izinguquko ngokuzenzakalela
Amasethingi we-Low Fat athembisa ukukhuphula ijubane nokunciphisa ukusetshenziswa kwememori kwe-KDE. Le phakheji ebizwa ngokuthi Kubuntu-Low-Fat-Settings, inikeza isethi yezinketho zokumisa ezizama ukunciphisa ukusetshenziswa kwememori kanye nokusheshisa isikhathi sokulayisha se-KDE ngo-32% no-33% ngokulandelana.
Ezinye izilungiselelo zifaka phakathi:
Ukwakheka kuvaliwe ngokuzenzakalela
Ikhubaza ukulayishwa okuzenzakalelayo kwamamojula ahlukahlukene, njenge-bluedevil, isazisi sendawo yamahhala, ezinye izinsizakalo zeNepomuk nezinye izinto.
Yehlisa inani lama-plugins okuzenzakalelayo we-KRunner alayishwa ngokuzenzakalela.
Yehlisa inani lemiphumela esetshenziswa ekuhlobiseni iwindi.
Inhloso yephakheji ukuvumela abasebenzisi abane-hardware endala ithuba lokusebenzisa ideskithophu ye-Kubuntu ngejubane elamukelekayo.
Ukufaka iphakheji nje:
sudo apt-get ukufaka kubuntu-low-fat-izilungiselelo
Yenza izinguquko "ngesandla"
Labo abangenaKubuntu bangenza ushintsho ngesandla. Kule vidiyo elandelayo kukhonjiswa eziningi zazo:
Ngeminye imininingwane, ngincoma ukufunda Ubuntu Forums.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ungayisheshisa kanjani i-KDE, kulula futhi iyashesha
Engxoxweni nomunye wezithuthukisi ze-Klyde (ukupakisha kwendabuko okuhlukile kwe-KDE, okukhuthazwe ngabathuthukisi ababili be-OpenSuse), umlondolozi weKwin uthe bekuncamela, ngenxa yokuzinza, ukugcina ukwakheka kusebenza futhi kukhubaze yonke imiphumela ebonakalayo .
Ngale ndlela, ukusetshenziswa kwe-Kwin kuncishisiwe ngaphandle kokuthinta ukuzinza; ukukhubaza ukwakheka kuzophelelwa yimiphumela futhi kudle izinsizakusebenza ezincane, kepha ukuzinza kweKwin kungathinteka.
Ngithukile ngephesenti lokusetshenziswa kwe-CPU umfana onalo kuvidiyo akukhompyutha yakhe. Ine-processor yakho esebenza ngaphezu kwe-50% ngaso sonke isikhathi futhi inezinhlamvu ezimbili. Imayini iyi-P4 3.2 Mhz eneminyaka ecishe ibe ngu-13 (indala kakhulu kodwa sengikhule ngamagilebhisi) futhi nginezimbotshana ezimbili (i-virtual eyodwa) nangomqapha wohlelo olubonwayo angifinyeleli ngaphezu kuka-8%, ngokwesilinganiso sokuma ngemodi Ngiphakathi kuka-0.5 no-1%, i-YouTube ku-360p idlala amavidiyo ngokusetshenziswa okungama-25% we-CPU.
Angikwazi ukusho noma yini nge-RAM, ngokuguqulwa ukusetshenziswa kwayo kufana kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu ngalokhu kucaciswa, kujwayelekile ukubona ukukhubazeka okuphelele kwemiphumela yedeskithophu kulolu hlobo lokufundisa ukonga ukusetshenziswa kwe-KDE.
URodolfo A. González M. kusho
Ngemuva kokufunda amakholomu amaningi we-KDE kubhulogi, futhi ngenxa yokuguqulwa okuphoqelelwe kwemishini, nginqume ukuzama i-KDE ngemuva kweminyaka ngisebenzisa iGnome, konke kubonakale kukuhle kakhulu, anginazo nezinkinga zemithombo, i-Core i5 6Gb ye-RAM, kepha yini egcina ukubuyela eGnome kuyimikhawulo ene-Kio, ngidinga ukuhlela ngqo amafayela avela kumaseva ahlukahlukene akude, i-FTP, i-SSH, i-SMB, kepha ababaningi abahleli abasekelwa yi-Kio.
Kepha njengedeskithophu yomuntu ovela endaweni ye-Windows, yinhle kakhulu, inesakhiwo esihle kakhulu futhi kimi enembile.
Phendula uRodolfo A. González M.
Ngenxa yelukuluku: ukufaka amafolda akude ngeDolphin awukwazi ukuwahlela lawo mafayela?
Ekhaya nginomshini ophakathi nendawo futhi oyiseva yeNFS, futhi ama-laptops angafinyelela futhi aguqule amafayela asemshinini ophakathi.
Empeleni impendulo inguyebo, kepha kuphela ngabahleli abasekela uKio. Endabeni yami ngisebenzisa i-Sublime, futhi lapho ngiguqula ifayela futhi ngiligcina, ushintsho alusebenzi kufayela lesikhashana kukhompyutha yami, izinguquko zilayishwa noma ngivala i-Sublime, ngomyalezo we-Kio ongitshela ukuthi lelo fayela liguquliwe futhi uma ngifuna ukusindisa ushintsho. Ungacabanga usebenza ku-php kanjena?
Kuya ngokuthi ufaka ikhodi kanjani, uma urekhoda ividiyo eluhlaza, ngaphandle kokucindezelwa ngeke idle lutho, kepha uma ngesikhathi esifanayo iqopha, icindezela ividiyo, kunengqondo ukuthi isetshenziswa yi-CPU
Lokho kuyiqiniso impela, ngiyabonga futhi.
Ngikwenzile lokho kuhlolwa ngaphambilini futhi iprosesa ayikaze inginike izilinganiso ezinjalo. Noma kunjalo ngiyabonga ngokucaciswa.
kusobala ukuthi uzoba ne-processor ngo-50% ngaso sonke isikhathi ... iqopha ideskithophu yakho ...
Umnikelo omuhle kakhulu! Ngiyabonga
Bengingakuqondi kahle XD kepha ngabe uke wazama ngezixhumanisi ezinengqondo? ln -l
osonhlamvukazi ln -L
Khombisa amaphesenti we-Baterry
Ungawulanda kanjani umculo kumavidiyo we-Youtube